Yintoni eyimfihlakalo yento ebumnyama?
Ngethuba lokuqala lo mbandela omnyama uphakanyiswa njengenxalenye yendalo yonke, mhlawumbi kwakubonakala ngathi yinto enzima kakhulu ukuyicebisa. Into echaphazelekile kwimigqaliselo, kodwa ayikwazanga ukufunyanwa? Njani loo nto?
Ukufumana Ubungqina Bokumnyama
Ekuqaleni kwekhulu lama-20, izazi-physics zazifumana ixesha elinzima ngokuchazela ukujikeleza kwamaritha. Ijika lokujikeleza liyiqonga lesantya sokuhamba kweenkwenkwezi ezibonakalayo kunye negesi kwinthala kunye kunye nomgama wabo ukusuka kwintsika ye-galaxy.
Ezi zengqungquthela zenziwe ngedatha yokuqwalasela eyenziwa xa izazi zeenkwenkwezi zilinganisa ukujikeleza (ijubane) ukuba iinkwenkwezi kunye namafu egesi zihamba njengoko zihamba ngeenxa zonke kwinqanaba le-galaxy kwi-orbit circular. Okubalulekileyo, izazi zeenkwenkwezi zilinganisela ukuba iinkwenkwezi ezikhawulezayo zihamba zijikeleze iindidi zezigulane zazo. Ukusondela kwinto ethile kuphakathi kwegalaxy, ihamba ngokukhawuleza; kude kubekho, ihamba kancane.
Iingcali zeenkwenkwezi zaqaphela ukuba kwiimithala zaziqaphela, ubunzima bezinye iindile ezingafanelanga ubunzima beenkwenkwezi kunye negesi amafu abona ngokwenene. Ngamanye amazwi, kwakukho "izinto" ezingaphezulu kwimigqomo kunokuba ingabonwa. Enye indlela yokucinga ngale ngxaki kukuba imilambo ayizange ibonakale inokwanela ngokwaneleyo ukuchazela amazinga abo ajikelezayo.
Ngubani Wayefuna Ubumnyama?
Ngomnyaka we-1933, i-physicist Fritz Zwicky wacetyisa ukuba mhlawumbi ubunzima belapho, kodwa akazange alahle nayiphi na imitha kwaye yayingabonakali emehlweni.
Ngoko, izazi zeenkwenkwezi, ngokukodwa ekupheleni kukaDkt. Vera Rubin kunye noogqirha bakhe ophando, bachithe iminyaka elandelayo benza izifundo kwizinto ezivela kwizinga le-galactic ukujikeleza kwintsholongwane , ukuhamba kweenkwenkwezi zeenkwenkwezi kunye nemilinganiselo ye-cosmic microwaves background. Oko bakufumeneyo kubonise ukuba kukho into ekhona.
Kwakuyinto ebalulekileyo echaphazela iindidi zezigulane.
Ekuqaleni ezo ziphumo zadibana nenani eliphilileyo lokungathembeki kwintlalo yesayensi yeenkwenkwezi. UDkt. Rubin kunye nabanye baqhubeka begcina kwaye bafumanisa le "ukukhupha" phakathi kokubaluleka okubonakalayo kunye nesigxina semigqatsha. Ezi ngongoma ezongezelelweyo ziqinisekisile ukungafani kwimigqaliselo ye-galaxy kwaye yabonisa ukuba kukho into apho. Kwakungabonakali.
Ingxaki yokujikeleza kwegolina njengoko yayibizwa ngokuba yiyo yagqitywa "into" ebizwa ngokuba "into emnyama". Umsebenzi kaRubin ekuqwalaseleni nasekuqinisekiseni le ngxaki emnyama yaqatshelwa njengezenzululwazi ezonakalisa umhlaba kwaye wanikezelwa ngamagosa amaninzi kunye neendumiso zalo. Nangona kunjalo, inselele enye ihlala: ukucacisa ukuba yintoni into emnyama eyenziweyo kunye nokulinganiswa kwayo kwi-indalo.
Isiqhelo, into ekhanyayo yenziwe ngamabhanon - iincinci ezifana neeponons and neutrons, ezenza iinkwenkwezi, amaplanethi kunye nobomi. Ekuqaleni, into ebumnyama yayikholelwa ukuba yenziwe ngamanqaku anjalo, kodwa ivele yinto engenawo umbane .
Nangona kubonakala ukuba ubuncinane ubunzima bombhalo luqulethwe ngombala omnyama we-baryonic, mhlawumbi luyingxenye encinane yonke into emnyama.
Ingqwalasela ye-cosmic background microwave kunye nokuqonda kwethu kwe-Big Bang Bang, i-physics ekholelwa ekubeni i-baryonic kuphela into eqhubekayo isinda namhlanje engabandakanywa kwinkqubo yelanga okanye intsalela ye-stellar.
Ingxelo engeMnyama yeBaryonic
Kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba umba olahlekileyo woMhlaba uya kufumaneka kwindlela eqhelekileyo, ibarionic . Ngako oko, abaphandi bakholelwa ukuba enye inxalenye yeengqungquthela ezingabonakaliyo inokubonelela ngongoma okhoyo.
Ngokuchanekileyo le nto yintoni, kwaye indlela eya kuba yintoni imfihlakalo. Nangona kunjalo ii-physicists ziye zachonga ezintathu zentlobo yemeko ebumnyama kunye neengqungquthela zomviwa ezibandakanya uhlobo ngalunye.
I-Cold Dark Matter (i-CDM) : Umgqatswa onokuba ngumntu omnyama ngumcimbi omnyama obumnyama (CDM). Nangona kunjalo, ayikho inqwelwana echanekileyo yomviwa okhoyo. Umqhubi ohamba phambili we-CDM ubizwa ngokuba yi-particle enkulu (interactive). Nangona kunjalo, kukho ukungabikho kwesizathu sobulungisa sokubakho kwezi ngqungquthela; oko kukuthi asiqinisekanga ukuba babeza kuvela ngaphantsi kwemeko yendalo. Ukuphanda, abaphandi baqhuba iimvavanyo ze-physics zokuhlola ukuba izidibaniso ziya kuvelisa i-particle. Ezinye iimeko ze-CDM ziquka ii-Axions - ii-particle-specificories ezifunekayo ukucacisa into ethile kwi-quantum chromodynamics (QCD). Nangona la maqhekeza ayengakaze afunyanwe. Kwaye, ekugqibeleni, ii-MACHOs (ii-MAssive Compact Halo Objects) zingachaza ubunzima, kodwa i-dynamics ethile iyaqhubeka ifumaneke. Ezi zinto zibandakanya izimbobo ezimnyama , iinkwenkwezi zamandulo ze-neutron kunye nezinto zeeplanethi ezingabonakaliyo (okanye phantse njalo) kwaye ziqulethe ubungakanani obukhulu. Ingxaki apha kukuba bekuya kubakho ubuninzi babo (okungaphezulu kunokuba kulindeleke ukuba banikwe iminyaka yobude bemibutho ethile) kunye nokusabalalisa kwabo kuya kufuneka kumangaliswe (akunakwenzeka?) Efanayo.
Ubume obumnyama (WDM) : Le fomu yomcimbi omnyama kucatshangelwa ukuba yenziwe nge-neutrinos oyinyumba. Ezi ziyi-particles ezifana ne-neutrinos eziqhelekileyo zokulondolozwa kwenyaniso yokuba zikhulu kakhulu kwaye azidibanisi namandla angabuthathaka. Omnye umviwa weWDM yi-gravitino. Le ngqungquthela yezinto eziza kubakho xa kufuneka inkolelo yobuhle - ukudibanisa ukuhambelana ngokubanzi kunye ne-supersymmetry-fumana ukulandelana. Ngokuqinisekileyo ubungqina bokuba ubukho be-gravitino buya kubaluleka kwizinto zombini ze-physics.
Umnyama omnyama (i-HDM) : I-subset yeengqungquthela ezibhekwe njenge-Dark Dark Matter yizona kuphela eziyaziwayo ukuba zikhona: i-Neutrinos. Ingxaki ngale nkcazo kukuba uhambo lwe-neutrinos malunga nelijubane lokukhanya kwaye ngenxa yoko "aluyikudibanisa" ngendlela esenza ngayo umcimbi omnyama. Kwakhona kunikezwa ukuba i-neutrino iphantse ingenasiphelo semali engabonakaliyo iya kufuneka ukuba ihlangabezane neentsilelo ezifunekayo. Enye inkcazo kukuba kukho uhlobo olungafumanekiyo okanye ukunambitheka kwe-neutrino oluya kufana nalawa sele eyaziwayo ukuba abekho ngaphandle koba nobunzima obukhulu kakhulu (kwaye mhlawumbi mhlawumbi isantya esicothayo).
Ekugqibeleni umviwa ogqithiseleyo kumcimbi omnyama ubonakala ubumnyama obumnyama, kunye nee- WIMP ngqo. Nangona kunjalo kukho ubuncinane ubunobungqina kunye nobungqina beenxalenye ezinje (ngaphandle kokuba sinokuthi singabangela ukuba kukho uhlobo oluthile lomcimbi omnyama). Ngoko siyindlela ende yokuba neempendulo kulo mbandela.
Iingcamango eziNye zoMnyama
Abanye baye bacetyiswa ukuba loo nto emnyama ingumcimbi oqhelekileyo osigxile kwimimbobo emnyama emigqabileyo emalunga nemigangatho enkulu kunzima kunokuba iphakathi kwendima esebenzayo .
(Nangona abanye bebanokuqwalasela le nto into ebomvu ebomvu). Nangona oku kuya kunceda ukucacisa ezinye zeengxaki eziphazamisayo eziphawulwe kwimigqatsha kunye namaqoqo e- galaxy , abayi kukwazi ukusombulula ezininzi zeengqungquthela zokujikeleza kwegalactic.
Enye, kodwa inkolelo eyamkeleke ngaphantsi, kukuba mhlawumbi ukuqonda kwethu ukusebenzisana neentlondi kungalunganga. Sisekela ixabiso lethu elilindelekileyo ngokuvisisana ngokubanzi, kodwa kusenokuba kukho ukuphosakela okubalulekileyo kule ndlela kwaye mhlawumbi i-differentory theory ichaza ukujikeleza kwe-galactic enkulu.
Nangona kunjalo, oku akubonakali kakhulu, ekubeni iimvavanyo zobudlelwane obuqhelekileyo ziyavumelana namaxabiso aqikelelweyo. Naluphi na umbandela obumnyama obuya kuba, ukuqikelela ukuba uhlobo lwalo luya kuba yinto ephumelelayo enkulu yeenkwenkwezi.
Ehlelwe nguCarolyn Collins Petersen
URyan Tedder Ubomi kunye neProfayili
Ukwakhiwa kwamandla eRoma yasekuqaleni